अहिलेसम्म कोरोनाले छुन नसकेका यी १० देश, किन पुगेन त्यहाँ कोरोना, कसरी भयो यस्तो सम्भव ? — Sanchar Kendra
अहिलेसम्म कोरोनाले छुन नसकेका यी १० देश, किन पुगेन त्यहाँ कोरोना, कसरी भयो यस्तो सम्भव ?
काठमाडाैं । कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणका कारण अहिले विश्वका धेरै देश सङ्कटमा परेका छन् । गएको डिसेम्बरमा चीनको वुहानमा देखिएको कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण त्यसको केही हप्तामा नै विश्वका धेरै देशमा फैलियो । अहिले विश्वका दुई सय १३ देश कोरोनाविरुद्ध लडिरहेका छन् ।
अहिलेसम्म कोरोनाका कारण विश्वका आठ लाखभन्दा धेरै मानिसको ज्यान गइसकेको छ । तर विश्वका यस्ता केही देश छन्, जहाँ अहिलेसम्म कोरोना पुगेको छैन ।अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएअनुसार विश्वका १० देशमा अहिलेसम्म कोरोना सङ्क्रमण पुगेको छैन । कोरोना सङ्क्रमण नदेखिए पनि यी देशमा कोरोनाले भने असर पुर्‍याएकाे छ ।
कोरोनाका कारण विश्वकै अर्थतन्त्र डामाडोल भएकाले ती देशमा पनि आर्थिक समस्या परेको खबरमा उल्लेख छ । कोरोना सङ्क्रमण नदेखिएका १० देश पलाउ, माइक्रोनेशिया, मार्शल आइल्याण्ड, नाउरु, किरिबाती, सोलोमन आइल्याण्ड, तुवालु, समोआ, भानुअतु र टोङ्गा रहेका छन् ।
पलाउको सीमा क्षेत्र मार्च महिनादेखि नै बन्द छ । ‘द पलाउ होटल’ का प्रबन्धक ब्रायन लीले समुद्रकाे दुनियाँमा पलाउ जति सुन्दर अरु नभएको बताएका छन् ।पलाउभन्दा झण्डै चार हजार किलोमिटरको दुरीमा मार्शल आइल्याण्ड छ । यहाँ पनि कोरोनाको सङ्क्रमण छैन । मार्शल आइल्याण्डमा एसिया र अमेरिकाका नागरिक धेरै पुग्ने गर्छन् ।
राष्ट्रियस्तरमा मार्शल आइल्याण्ड समूहमा काेभिड–१९ का कारण सात सयभन्दा धेरैकाे राेजगारी गुम्ने आँकलन गरिएकाे छ । सन् १९९७ पछि याे सबैभन्दा ठूलाे गिरावट हाे । यीमध्ये दुई सय ५८ राेजगारी हाेटल र रेस्टुरेन्ट क्षेत्रकाे गुम्न सक्ने बताइएकाे छ ।
तर मार्शल आइल्याण्ड समूहकाे सेल्फ आइसाेलेशनले पर्यटकलाई धेरै प्रभावित गरेकाे छ । किनकि पलाउकाे तुलनामा मार्शल आइल्याण्ड पर्यटनमा बढी निर्भर छ । माछा उद्याेग बन्द हुनु यहाँकाे ठूलाे समस्या हाे ।
डाक्टर लेन टारिभाेन्डा भानुअतुका सार्वजनिक स्वास्थ्य विभागका निर्देशक हुनुहुन्छ । उहाँ तीन लाख जनसङ्ख्या भएकाे राजधानी क्षेत्र पोर्ट भिलामा काम गर्नुहुन्छ । उहाँ अम्बे क्षेत्रबाट हुनुहुन्छ, जहाँकाे जनसङ्ख्या झण्डै १० हजार छ । डॉक्टर लेन टारिभाेन्डाका अनुसार भानुअतुका झण्डै ८० प्रतिशत मानिस सहर र औपचारिक अर्थव्यवस्थाभन्दा बाहिर छन् ।
​यस्तै अरु ६ देशमा पनि काेराेना सङ्क्रमण देखिएकाे छैन तर पर्यटक नहुँदा त्यहाँ आर्थिक गतिविधि घट्न थालेका छन् । स्राेत : एसियाली विकास बैंककाे प्यासिफिक आर्थिक सर्वेक्षण, ३० जुलाई ।